Causative Form ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘယ်လို သုံးရလဲ? -
Causative Form ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘယ်လို သုံးရလဲ?
Posted on March 8, 2019 Author Myat Moe	Comment(0)
၅ မျိုး တောင် ရှိတယ်တဲ့နော်…
Causative Form လို့ပြောလိုက်ရင် တော်တော်များများက ကြောင်ထွက်သွားကြပါတယ်။ အသုံးတွေကိုတော့ မြင်ဖူး၊ ကြားဖူးနေကျ ဖြစ်ပေမဲ့ သဒ္ဒါကျကျ Causative Form ဆိုရင်တော့ ဘာမှန်းမသိတော့တာမျိုးပေါ့..
Causative ဆိုတဲ့စကားက cause => ဖြစ်ပွားစေတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးက လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့အသုံးကို အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုကို ဖြစ်ပွားစေတဲ့အခါမျိုးမှာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။ Causative Form ကို ဖြစ်စေတဲ့ Causative Verb (၅)မျိုး ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့
Help ဆိုတဲ့ (၅)မျိုးပါ။ ဒါဆို ဒီ (၅)မျိုးကို Causative Form အဖြစ် ဘယ်လို သုံးမလဲဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်နော်..
Let = တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်စေဖို့ ခွင့်ပြုခြင်း
ဥပမာ – Mary’s father won’t let her adoptapuppy because he’s allergic to dogs.
ဒီမှာဆိုရင် won’t let her adopt က သူ(မ)ကို မွေးခွင့်မပြုဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ သုံးသွားတာ တွေ့ရမှာပါ။ Past Tense အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း Let ရဲ့ Past tense က Let ပဲမို့ အပြောင်းအလဲ မရှိပါဘူး။
ဥပမာ – I wasn’t paying attention while cooking, and I let the food burn.
တကယ်လို့များ Let နေရာမှာ allow နဲ့ Permit ကို သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Allow/ Permit + Person/Thing + to + Verb ဆိုပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာ – I don’t allow my kids to watch violent movies.
Make = တစ်စုံတစ်ယောက်ကို တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်မြောက်စေဖို့ တွန်းအားပေးခြင်း/ တောင်းဆိုခြင်း
ဥပမာ – My ex-boyfriend loved sci-fi and made me watch every episode of his favorite show.
ဒီနေရာမှာတော့ ကျွန်မရဲ့ ex-boyfriend က သူကြိုက်တဲ့ ရှိုးတွေကို ကျွန်မ ကြည့်ချင်ချင်၊ မကြည့်ချင်ချင် တွန်းအားပေးပြီး ကြည့်ခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ Made me watch လို့ သုံးသွားပါတယ်။
တကယ်လို့များ make နေရာမှာ သူနဲ့ အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့ Force နဲ့ Require ကို သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဖွဲ့စည်းပုံက Force/Require + person + to + Verb (Base Form) ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာ – The school requires the students to wear uniforms. (စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်း မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့် အနေအထားတွေမှာ Require ကို သုံးပါတယ်။)
The hijacker forced the pilots to take the plane inadifferent direction. (Force ကိုတော့ အတင်းအဓမ္မ ဖိအားပေးတဲ့နေရာမှာ၊ ခြိမ်းခြောက်တဲ့နေရာမျိုးမှာ သုံးပါတယ်။)
Related article >>> Academic Writing ဆိုတာ
Have = တစ်စုံတစ်ယောက်ကို တာဝန်တစ်ခုခု ပေးလိုက်ခြင်း
သူ့မှာတော့ ဖွဲ့စည်းပုံ (၂)မျိုး ရှိပါတယ်။
လူကို တစ်ခုခု ခိုင်းမယ်ဆိုရင် Have + Person + Verb (base form)
The businessman had his secretary made copies of the report.
ပစ္စည်းတွေကို တစ်ခုခု လုပ်မယ်ဆိုရင် Have + Thing + Past Participle of Verb
He had his jacket cleaned. (သူ့ဂျက်ကက်ကို သူကိုယ်တိုင် သန့်ရှင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခြားတစ်ယောက်က သန့်ရှင်းပေးတာပါ)
ဒီ ဖွဲ့စည်းပုံမှာတော့ သတိထားရမှာက စကားလုံးအစီအစဉ်ပါ။
ဥပမာ အားဖြင့် John had his car repaired. နဲ့ John had repaired his car. ဆိုတဲ့ စာကြောင်း နှစ်ကြောင်းမှာဆိုရင် ဒုတိယ တစ်ကြောင်းက ဂျွန်က သူ့ကားကို သူကိုယ်တိုင် ပြင်တာ ဖြစ်ပြီး ပထမ ဝါကျကတော့ ဂျွန်က သူ့ကားကို တခြားလူနဲ့ ပြင်တာပါ။ ဘယ်သူပြင်လဲဆိုတာတော့ မသိဘူးပေ့ါလေ.. ဂျွန်မဟုတ်တာတော့ ကျိန်းသေပါပဲ.. ဒီအသုံးက Passive အသုံးနဲ့ အတော်တူပါတယ်။
Have နေရာမှာ Informal အနေနဲ့ Get ကို သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ get + thing+ Past Participle ဆိုပြီး သုံးလို့ရပါတယ်။
ဥပမာ – My washing machine is broken; I need to get it repaired.
Get = တစ်ယောက်ယောက်ကို တစ်ခုခု လုပ်ဖို့ ဆွဲဆောင်ခြင်း/ အားပေးခြင်း
Get + Person + To+ Verb
ဒါက တကယ်ကို ရှင်းပါတယ်။ Formally သုံးလို့ရတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ တစ်မျိုးပဲ ရှိတာပါ။
ဥပမာ – How can we get all the employees to arrive on time?
Help = တစ်စုံတစ်ယောက်ကို တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ကူညီပေးခြင်း
ဒီမှာတော့ Help နောက်မှာ To လိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မလိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ နှစ်မျိုးလုံး သုံးလို့ရပါတယ်။ နှစ်မျိုးလုံး မှန်ပါတယ်။ To မပါဘဲ သုံးကြတာတော့ ပိုများပါတယ်။
ဥပမာ – He helped me carry the boxes.
ဒါဆိုရင်တော့ တစ်စုံတစ်ခုကို ဖြစ်စေတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ Causative Form ကို နားလည်လောက်ပြီလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောက်များမှာလည်း ဘယ်လို အသုံးဝင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အသုံးတွေနဲ့ ပြန်လာခဲ့မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးလို့..
Myat ( For Her Myanmar)
၅ မြိုး တောငျ ရှိတယျတဲ့နျော…
Causative Form လို့ပွောလိုကျရငျ တျောတျောမြားမြားက ကွောငျထှကျသှားကွပါတယျ။ အသုံးတှကေိုတော့ မွငျဖူး၊ ကွားဖူးနကြေ ဖွဈပမေဲ့ သဒ်ဒါကကြ Causative Form ဆိုရငျတော့ ဘာမှနျးမသိတော့တာမြိုးပေါ့..
Causative ဆိုတဲ့စကားက cause => ဖွဈပှားစတေယျဆိုတဲ့ စကားလုံးက လာပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူ့အသုံးကို အကွောငျးကိစ်စတဈခုခုကို ဖွဈပှားစတေဲ့အခါမြိုးမှာ တှမွေ့ငျရပါတယျ။ Causative Form ကို ဖွဈစတေဲ့ Causative Verb (၅)မြိုး ရှိပါတယျ။ ဒါတှကေတော့
Help ဆိုတဲ့ (၅)မြိုးပါ။ ဒါဆို ဒီ (၅)မြိုးကို Causative Form အဖွဈ ဘယျလို သုံးမလဲဆိုတာ ကွညျ့ကွရအောငျနျော..
Let = တဈစုံတဈခု ဖွဈစဖေို့ ခှငျ့ပွုခွငျး
ဒီမှာဆိုရငျ won’t let her adopt က သူ(မ)ကို မှေးခှငျ့မပွုဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျနဲ့ သုံးသှားတာ တှရေ့မှာပါ။ Past Tense အနနေဲ့သုံးမယျဆိုရငျလညျး Let ရဲ့ Past tense က Let ပဲမို့ အပွောငျးအလဲ မရှိပါဘူး။
တကယျလို့မြား Let နရောမှာ allow နဲ့ Permit ကို သုံးမယျဆိုရငျတော့ Allow/ Permit + Person/Thing + to + Verb ဆိုပွီး ဖှဲ့စညျးပုံ ပွောငျးသှားပါလိမျ့မယျ။
ဥပမာ – I don’t allow my kids to watch violent movies.Our boss doesn’t permit us to eat lunch at our desks.
Make = တဈစုံတဈယောကျကို တဈစုံတဈခု ဖွဈမွောကျစဖေို့ တှနျးအားပေးခွငျး/ တောငျးဆိုခွငျ
းMake + Person + Verb (Base form)
ဒီနရောမှာတော့ ကြှနျမရဲ့ ex-boyfriend က သူကွိုကျတဲ့ ရှိုးတှကေို ကြှနျမ ကွညျ့ခငျြခငျြ၊ မကွညျ့ခငျြခငျြ တှနျးအားပေးပွီး ကွညျ့ခိုငျးတယျဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျနဲ့ Made me watch လို့ သုံးသှားပါတယျ။
တကယျလို့မြား make နရောမှာ သူနဲ့ အလားသဏ်ဍာနျတူတဲ့ Force နဲ့ Require ကို သုံးမယျဆိုရငျတော့ ဖှဲ့စညျးပုံက Force/Require + person + to + Verb (Base Form) ဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။
ဥပမာ – The school requires the students to wear uniforms. (စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှအေတိုငျး မဖွဈမနလေုပျရမယျ့ အနအေထားတှမှော Require ကို သုံးပါတယျ။)
The hijacker forced the pilots to take the plane inadifferent direction. (Force ကိုတော့ အတငျးအဓမ်မ ဖိအားပေးတဲ့နရောမှာ၊ ခွိမျးခွောကျတဲ့နရောမြိုးမှာ သုံးပါတယျ။)
Have = တဈစုံတဈယောကျကို တာဝနျတဈခုခု ပေးလိုကျခွငျး
သူ့မှာတော့ ဖှဲ့စညျးပုံ (၂)မြိုး ရှိပါတယျ။
လူကို တဈခုခု ခိုငျးမယျဆိုရငျ Have + Person + Verb (base form)
ပစ်စညျးတှကေို တဈခုခု လုပျမယျဆိုရင Have + Thing + Past Participle of Verb He had his jacket cleaned.
(သူ့ဂကျြကကျကို သူကိုယျတိုငျ သနျ့ရှငျးတာ မဟုတျပါဘူး။ အခွားတဈယောကျက သနျ့ရှငျးပေးတာပါ)
ဒီ ဖှဲ့စညျးပုံမှာတော့ သတိထားရမှာက စကားလုံးအစီအစဉျပါ။
ဥပမာ အားဖွငျ့ John had his car repaired. နဲ့ John had repaired his car. ဆိုတဲ့ စာကွောငျး နှဈကွောငျးမှာဆိုရငျ ဒုတိယ တဈကွောငျးက ဂြှနျက သူ့ကားကို သူကိုယျတိုငျ ပွငျတာ ဖွဈပွီး ပထမ ဝါကကြတော့ ဂြှနျက သူ့ကားကို တခွားလူနဲ့ ပွငျတာပါ။ ဘယျသူပွငျလဲဆိုတာတော့ မသိဘူးပေ့ါလေ.. ဂြှနျမဟုတျတာတော့ ကြိနျးသပေါပဲ.. ဒီအသုံးက Passive အသုံးနဲ့ အတျောတူပါတယျ။
Have နရောမှာ Informal အနနေဲ့ Get ကို သုံးခငျြတယျဆိုရငျတော့ get + thing+ Past Participle ဆိုပွီး သုံးလို့ရပါတယျ။
Get = တဈယောကျယောကျကို တဈခုခု လုပျဖို့ ဆှဲဆောငျခွငျး/ အားပေးခွငျး
ဒါက တကယျကို ရှငျးပါတယျ။ Formally သုံးလို့ရတဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံ တဈမြိုးပဲ ရှိတာပါ။
Help = တဈစုံတဈယောကျကို တဈခုခုလုပျဖို့ ကူညီပေးခွငျ
းHelp + Person + Verb (base form)
ဒီမှာတော့ Help နောကျမှာ To လိုကျသညျဖွဈစေ၊ မလိုကျသညျဖွဈစေ၊ နှဈမြိုးလုံး သုံးလို့ရပါတယျ။ နှဈမြိုးလုံး မှနျပါတယျ။ To မပါဘဲ သုံးကွတာတော့ ပိုမြားပါတယျ။
ဒါဆိုရငျတော့ တဈစုံတဈခုကို ဖွဈစတေဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံ Causative Form ကို နားလညျလောကျပွီလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ နောကျမြားမှာလညျး ဘယျလို အသုံးဝငျတဲ့ အင်ျဂလိပျစာ အသုံးတှနေဲ့ ပွနျလာခဲ့မလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ပေးကွပါဦးလို့..
Tagged language, Sunday English
Posted on December 26, 2016 August 7, 2017 Author